जनकपुरको समस्या समाधान गर्न आन्दोलन गर्न पनि पछि पर्दैनौँः मनोज साह, नगर सभापति नेपाली कांग्रेस, जनकपुर नगर समिति – doodhmati || dudhmati
Home / बातचित / जनकपुरको समस्या समाधान गर्न आन्दोलन गर्न पनि पछि पर्दैनौँः मनोज साह, नगर सभापति नेपाली कांग्रेस, जनकपुर नगर समिति
जनकपुरको समस्या समाधान गर्न आन्दोलन गर्न पनि पछि पर्दैनौँः मनोज साह, नगर सभापति नेपाली कांग्रेस, जनकपुर नगर समिति
Sujeet Jha March 23, 2018	बातचित 1,111 Views
प्र. जनकपुरको कामकाजप्रति नेपाली कांग्रेस किन मौन देखिएको छ ?
हामी मौन छैनौँ । नगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साह कसरी कार्य अगाडी बढाई रहेका छन त्यसको प्रतिक्षा गरिरहेका थियौँ तर भिजन नै नभएका व्यक्तिले जनकपुरको समस्याहरु समाधान गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । शुरुमै हामीले बिरोध गरेको भए कामै गर्न दिएन आरोप लगाउन बेर लाग्दैन थियो होला तर अब मेयरको आलोचना ठाउँ ठाउँमा हुन थालेको छ । अब हामी पनि चाँडै योजना बनाएर खबरदारी गर्नका लागि अगाडी बढ्ने छौँ ।
नगरपालिका बाटो क्लिियर गराउनमा कुनै रुचि देखाउन सकिरहेको छैन यस्तो अवस्थामा परियोजना फिर्ता पनि हुन सक्ने डर छ ।
प्र. एडिवी परियोजना समाप्त हुने आशंका समेत गर्न थालिएको छ ?
हो, मैले नै केही ठाउँमा भाषणकै क्रममा बोलेको छु यो कुरा । नगरपालिका बाटो क्लिियर गराउनमा कुनै रुचि देखाउन सकिरहेको छैन यस्तो अवस्थामा परियोजना फिर्ता पनि हुन सक्ने डर छ । शिव चोकदेखि भानु चोकसम्म बाटो अस्त व्यस्त भएको महिनो भईसक्यो तर कुनै कार्य अगाडी बढिरहेको छैन । बाटो फराकिलो पार्नका लागि बैठक बोलाइन्छ मेयरले त्यो बैठकमा तपाईहरुको सडक फराकिलो पार्ने ईच्छा छ भने घर तोड्नुस नभए नतोड्नुस जस्ता अभिव्यक्ति दिने गरेका छन ।
प्र. मेयर लालकिशोरले किन सडक फराकिलो गर्नमा रुचि देखाई रहेका छैनन ?
यसको पछाडी रामानन्द चोक नजिक उहाँको घर पनि रहेको छ । उहाँको घर सडकमै छ त्यो नभत्कियोस उनको चाहना छ । जनक चोकदेखि जानकी मन्दिर हुँदै रामानन्द चोकसम्म कसरी कार्य हुन्छ यी सबै समस्याका कारण एडिवी परियोजना विफल हुने खतरामा परेको छ ।
नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आउनु पूर्व नै जनकपुर उपमहानगरपालिका १८को भोइलमा १२ बिघा जग्गा लिई सकिएको छ । ४ लाख ५ हजार वार्षिक भाडा पनि बुझाउने निर्णय भई सकेको छ । ४८ करोड रुपैया राखिएको छ । तर नगरपालिकाले कार्य नै गरिरहेको छैन । आश्चर्य लागिरहेको छ यो मेयर यत्रो सम्भावना हुँदा पनि मौन बसेका छन । किन मौन बसेका छन । नोचा पोखरीमा सौन्दर्यीकरणका कार्य भई रहेको छ । ५ करोड लागि सकेको छ । ५ करोड अरु टेण्डर पनि भएको छ तर परिषदमा त्यसको चर्चासम्म छैन । नगरपालिकाको मार्फत भई रहेको कार्य पनि नगरपालिकाले उठाउन सकिरहेको छैन ।
प्र. एडिवी परियोजनालाई खतरामा पार्ने कार्य तपाईहरुकै नेता विमलेन्द्र निधिले फुलगामामा ल्याण्डफिल्ड साइट नदिएर गरेकै हुन ?
यो गलत आरोप हो । नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आउनु पूर्व नै जनकपुर उपमहानगरपालिका १८को भोइलमा १२ बिघा जग्गा लिई सकिएको छ । ४ लाख ५ हजार वार्षिक भाडा पनि बुझाउने निर्णय भई सकेको छ । ४८ करोड रुपैया राखिएको छ । तर नगरपालिकाले कार्य नै गरिरहेको छैन । आश्चर्य लागिरहेको छ यो मेयर यत्रो सम्भावना हुँदा पनि मौन बसेका छन । किन मौन बसेका छन । नोचा पोखरीमा सौन्दर्यीकरणका कार्य भई रहेको छ । ५ करोड लागि सकेको छ । ५ करोड अरु टेण्डर पनि भएको छ तर परिषदमा त्यसको चर्चासम्म छैन । नगरपालिकाको मार्फत भई रहेको कार्य पनि नगरपालिकाले उठाउन सकिरहेको छैन ।
नगरपालिकाले कुनै कार्य गरिरहेको छैन । जनप्रतिनिधि आएको जस्तो भान भई रहेको छैन । चुनावको बेला लामखुट्टे नियन्त्रण गर्छु, नगरलाई सफासुग्घर राख्छु निक्कै भाषणवाजी लालकिशोर साहले गरेका थिए । तर त्यो मुद्दा पनि बिर्सेका छन । जनस्वास्थ्य औषधी दिन तयार छ तर नगरपालिकाले संयोजनसम्म गर्न सकिरहेको छैन । जनकपुरमा दूई प्रकारले औषधी छर्किनु पर्छ एउटा मेशिनद्वारा र अर्को टंकिद्वारा नालामा औषधी छर्कनु पर्छ । लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि सफाईलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । नगरको समस्या समाधानका लागि हामी आजै डेलिगेशन गएको थिए ।
प्र. लामखुट्टे आतंकको विषयमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?
Tags नेपाली कांग्रेस मनोज साह
Previous लहानमा बम बिस्फोट, एक बालकसहित ८ जना घाईते
Next आस्थाको महापर्व चैती छठको आज तेस्रो दिन, अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइयौ ।। प्रत्येक वर्ष चैत र कातिक महिनामा छठ हुँदै
August 15, 2017	31,289